ထောင်ထဲမှာ နေချင်လို့ ဆွဲကြိုးယူပြေးပြီး ပြုံးစိစိနဲ့ အဖမ်းခံတဲ့ အမျိုးသမီး – Myanmar
ထောင်ထဲမှာ နေချင်လို့ ဆွဲကြိုးယူပြေးပြီး ပြုံးစိစိနဲ့ အဖမ်းခံတဲ့ အမျိုးသမီး
ဝမ်းနည်းရမှာလား ? ဝမ်းသာရမှာလား ? မိထိုင်းရယ်..
ထိုင်းနိုင်ငံ အူဒွန်ဌာနီမြို့ ဖိုးစီလမ်းမကြီးရှိ ယောင်ဝရတ် ရွှေဆိုင်ထဲသို့ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့က အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆိုင်ထဲသို့ ဝင်လာကာ ရွှေဆွဲကြိုး ၁ ဘတ်သား ၅ ကုံးကိုယူကြည့်ကာ “ ကျွန်မယူသွားမယ် “ နော်ဟုဆိုပြီး ထွက်ပြေးဟန်ပြုမူခဲ့သဖြင့် အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် အရောင်းဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး ဘန်ကျဝမ်းနှင့် အခြားဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့မှ ဖမ်းထိမ်းကာ ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြားခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။
ဆွဲကြိုးလုပြေးသူအသက် ၄၃ နှစ်အရွယ် နန်းခမ်းဟဲင်း အား ဝန်ထမ်းများက ဘာ့ကြောင့်ဒါမျိုးလုပ်ရတာလဲဟု ? ဟုမေးမြန်းရာ “ ထမင်းစားစရာမရှိလို့ “ ဟုပြုံပြုံးစစဖြင့် ဆိုပါသည် ။
ရဲတပ်ဖွဲ့၏ စစ်ဆေးချက်အရ အဆိုပါအမျိုးသမီးသည် လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ က အိမ်ထောင်ကွဲခဲ့ပြီး သမီးတစ်ယောက်နှင့် ဘဝကို ရုန်းကန်ရှာဖွေစားသောက်ခဲ့ရပြီး သမီးဖြစ်သူမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ထောင်ကျနေသဖြင့် သူတစ်ယောက်ထဲ အရပ်တကာလှည့်ကာ အဝတ်လျှော်မီးပူတိုက်သည့် အလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်မမှန်ကာ အခန်းငှါးခ တစ်လဘတ် ၂၀၀၀ မပေးနိုင်သည့်အပြင် ထမင်းနပ် မမှန်၍ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သွားတောင်းစားရတဲ့ရက်တွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ် ၊ ဒါ့ကြောင့်ဒီနေ့မှာ အတွေးတစ်ခုရလာတာက ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး ယူပြေးချင်ယောင်ဆောင်လို့ ထောင်ထဲရောက်ရင် ထောင်ထဲမှာနေစရာ စားစရာမပူရသလို သမီးဖြစ်သူနဲ့လည်းတွေ့ရမယ် ၊ ဒါ့ကြောင့် သူမအနေနဲ့ ယခုလို လုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖြောင့်ချက်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ် ။
ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ တရားဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များဆောင်ရွက်နေစဉ် သူမကတော့ သူ့သမီးနှင့်တွေ့ရဘို့အရေး တွေးလို့ပင်ပျော်နေပါတော့သည် ။ သူ့အတွေးနဲ့ သူကတော့ ဟုတ်နေတာပါဘဲ.. (စည်သူမောင်)
ဆန်ခိုးစားလို့ဆိုပြီး ကြွက်ကိုလူကြားထဲမှာ စာကပ်ပြီးအရှက်ခွဲတဲ့အဖြစ်အပျက်
Q စင်တာကနေ Negative နဲ့ ဆင်းလာပြီး (၅) ရက်ကြာမှ ကိုဗစ်လက္ခဏာတွေ ပြလာတဲ့အဖြစ်